Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo lagu daray Liiska Argagixisada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyad ah u taageeray in xayiraad la saaro Saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab, sida lagu sheegay Warbixin kasoo baxday Golaha.
Saraakiisha la sheegay in Golaha Ammaanka uu Liiska waxa loogu yeero Argagixisada ku daaray ayaa lagu kala magacaabaa Abuukar Cali Aadan oo ah ku-xigeenka hogaamiyaha shabaab, Macalin Ayman iyo Mahad Karataay.
Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNa ayaa sheegtay in dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashaneysa dowladda Mareykanka ay Golaha Ammaanka ka dalbatay in liiska Argagixisada loogu daray saddexda Sarkaal.
Erica Barks-Ruggles oo ah saraak sare oo ka tirsan xafiiska arimaha heyadaha Caalamiga ee Wasaarada Arimaha dibadda Mareykanka ayaa arintan ku tilmaantay talaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya.